होटल Maravel होटल4* (Rethymno): तस्बिर, मूल्यहरू र समीक्षा
क्रेते, ग्रीक पौराणिक कथाहरु हामीलाई थाह आज भू-मध्य सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्यहरू को छ। तिनीहरूले एक समुद्र तट छुट्टी प्रेमीहरूको र romantics ठाउँ पहिलो हात हेर्न चाहने, Gaia सर्वोच्च भगवान Zeus, तिनीहरू क्यालिप्सो को रानी7वर्ष कैद Odyssey मा आयोजित धेरै रूपमा Minotaur, पराजित गर्ने Ariadne र Theseus, भेट जहाँ जन्म दिए जहाँ यहाँ आउन ...
क्रेते को टापुमा पर्यटन विकास
द्वीप को एक पर्यटक केन्द्र मात्र अन्तिम शताब्दीको लेट 60-एँ विकास गर्न थाले रूपमा। क्रेते (Heraklion, Chania, Rethymno, आदि) मा प्रमुख शहर मा, पूर्वाधार विकास बाटो गरेर, समुद्री तट, erected होटल र यति मा। डी विकास क्रेते होटल, यस्तो Maravel होटल Rethymno4*, एक परम्परागत ग्रीक शैलीमा निर्मित थुप्रै गर्न थाले। तिनीहरूले टर्की वा स्पेनिश देखि मौलिक भिन्न छन्। क्रेते गरेको दुर्लभ बहु-मंजिल्ला भवन हुन्छन् जो होटल, हेर्न। यहाँ, लगभग सबै होटल two- वा तीन-मंजिल्ला bungalows फूल रूखहरू र shrubs एक सुन्दर पार्क मा स्थित हो को रूप मा प्रस्तुत। इलाका मा वयस्क र बच्चाहरु दुवै लागि समुद्र overlooking धेरै स्विमिंग पूल छन्। उदाहरणका लागि, Maravel होटल4* तिनीहरूलाई तीन मा। ती दुई एक टापुमा मुख्य डिजाइन परिदृश्य को तत्व मध्ये एक छ जो अर्को alluring पुल, जडान छन्। Cretan तटों लागि जाँदा, तिनीहरूले विविध हो: वहाँ सुनको बालुवा, साना पेबल्स र मिश्रित (बालुवा-पेबल्स) छन्।
Rethymno - ग्रीक माटो मा इटाली टुक्रा
यो प्राचीन शहर, द्वीप को उत्तर-पश्चिम मा स्थित छ जो, एक विशिष्ट स्वाद छ। यहाँ तपाईँले अद्भुत स्मारक हेर्न सक्नुहुन्छ: .. को भेनिस शैलीमा Majestic गढ, carved शटर, साँघुरो सडकमा, cobbled pavements आदि Rethymno दुई भागमा विभाजित छ संग रंगीन मध्ययुगीन घरहरू: आधुनिक, निरन्तर विकसित छ, यो एक वास्तविक महानगरबारे र ऐतिहासिक मा उत्तेजित गर्दछ जहाँ ध्यानपूर्वक नागरिक पुरातन मान लागि महत्त्वपूर्ण संरक्षित। शहर यो भाग मा एक कार छ। क्षेत्र पर्यटकहरु सौन्दर्य र पुरानो शहर रंग को प्रशस्त आनन्द उठाउन सक्छौं जुन बेलामा चल्छ, को लागि अभिप्रेरित। Rethymno युरोपेली बोहेमिया को मनपर्ने ठाउँ हो। यहाँ धेरै प्रतिभाशाली कलाकार, लेखक र संगीतकार कसरी आफ्नो सरस्वती को खोज मा आएको, सुन्दर कृति कसरी सिर्जना गरिएको थियो यो अद्भुत शहर दिन्छ कि प्रेरणा धन्यवाद! Rethymno मा गर्मी महिनामा धेरै चाडहरूमा होस्ट। खैर, यहाँ यो विश्वविद्यालय द्वीप को सबै भन्दा ठूलो छ। छोटो मा, यो शहर मात्र होइन एक रिसोर्टमा तर पनि क्रेते को एक प्रमुख वैज्ञानिक र सांस्कृतिक केन्द्र हो।
रिसोर्ट क्षेत्र रेथिनन
पहिले नै उल्लेख रूपमा, यो शहर क्रेते को उत्तरी तट मा स्थित छ। यसलाई उच्च शुद्धता द्वारा विशेषता छ र राम्रो तरिकाले सुसज्जित छ लागि भनेर वर्ष जित्यो निलो झण्डा युरोपेली संघ को। Rethymno मा समुद्र तट छुट्टी उत्कृष्ट जलवायु बढावा: प्रति वर्ष घाम दिन, सुन्दर गर्मीयाम र थोरै जाडो महिनामा अधिकतम संख्या, वर्षा को न्यूनतम संख्या। समुद्र तट शहर मा शुरू हुन्छ र धेरै किलोमिटर लागि तट साथ फैलिएको। या त पक्षमा त्यहाँ रिसोर्ट्स। अदेले, Plataniás, Adelianos Campos, आदि उत्तरार्द्ध रेथिनन को क्षेत्र मा, तर पनि क्रेते भर मात्र होइन होटल उपनगर को सबै भन्दा ठूलो छ छन्। यहाँ जो पर्यटकहरु एक आदरणीय बाँकी, गुणस्तर सेवा र पूर्ण विश्राम प्रदान गर्दछ को Maravel होटल (Rethymno)4* छ।
Adelianos Campos - सबै भन्दा राम्रो स्थान परिवार छुट्टी लागि
यो रिसोर्ट केन्द्र रेथिनन को खाडी को तट मा स्थित छ। रेथिनन को शहर देखि यो द्वारा 7.5 मी टाढा छ। यो रिसोर्ट को समुद्र तट मा पानी को खेल र मनोरञ्जनको लागि सबै अवस्था छ (पानी स्की, समुद्र प्याराशुट, सर्फिङ, स्कुबा डाइभिङ र अरूलाई।)। खैर, यहाँ, होटल अर्को Maravel होटल4* (Rethymno), सबै भू-मध्य एटलान्टिस गोता केन्द्र भन्दा प्रसिद्ध को मुख्यालय छ। यहाँ सबै दुनिया भर देखि छुट्टी सिजन मा भू-मध्य सागर तल अध्ययन यो खेल प्रेमीहरूलाई र वैज्ञानिकहरू आकर्षित गर्छ। Adelianos Campos क्रिसमस बिदा र नयाँ वर्ष मा खर्च गर्न आपत्ति गर्ने थियो छैन पर्यटकहरु, हामी पछि सहित Maravel होटल4* आवासीय भवन, नोभेम्बर बन्द र केवल मार्च को सुरुमा पर्यटकहरु आफ्नो ढोका खोलियो, निराश छन्। र अझै, तपाईं हिउँदमा क्रेते भ्रमण गर्न आफ्नो इच्छा मा दृढ हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यस्तो Chania, Heraklion र रेथिनन रूपमा ठूलो शहर मा होटल मा रहन सक्छ। सधैं खुला छन् कि सबै वर्ष दौर होटल हुन त्यहाँ हुनेछ।
Maravel होटल4* (क्रेते / रेथिनन / Adealianos Campos): त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने?
यो चार तारे होटल क्रेते स्थित दुई विमानस्थलको देखि equidistant छ। Chania र Heraklion दुवै बाट Adelianos Campos गर्ने बाटो 75 किलोमिटर टाढा छ। Maravel गर्न पर्यटन गर्ने किनेको पर्यटकहरु होटल4* (ग्रीस, Rethymno), पाठ्यक्रम, मास्को, सेन्ट पीटर्सबर्ग, Rstova-मा-डन र अन्य क्षेत्रीय केन्द्र यहाँ प्रत्यक्ष उडान उड देखि रूपमा Heraklion मार्फत यहाँ प्राप्त गर्न रुचि, तर मा Chania गर्न सक्छन् मात्र स्थानान्तरण संग सुलभ। भ्रमण प्याकेज मा टापुमा आइपुग्यो, को पाठ्यक्रम, एक घण्टा होटल जटिल इलाका मा ल्याउनेछ लागि कर्मचारी र भ्रमण संचालक पूरा।
सामान्य विवरण र स्थान
होटल Maravel होटल *420,000 पु2को एक क्षेत्र र समुद्र तट देखि 70 मीटर स्थित छ। कोठा चार two- र तीन तले भवन छन्। होटल 1982 मा निर्माण भएको थियो र पछिल्लो 2009 मा जीर्णोद्धार। यो जटिल तीन तारे होटल रूपमा देखा अघि: उहाँले आफ्नो4तारा पायो कि त थियो। यसको क्षेत्र, "Marvel भूमि" भनिएको छ र समावेश रेस्टुरा धूपघडी क्षेत्र, बारहरू, खाजा बारहरू, फैशनेबल फूल-भरिएको बगैचा, र यति मा संग स्विमिंग पूल। डी
मानक (25 मिटर 2), स्टूडियो (25 m2) र परिवार (45 मिटर 2): होटल तीन विभाग को 130 कोठा छ। भित्री कोठा भद्र छ तर यो तपाईं एक आरामदायक रहन को लागि आवश्यक सबै कुरा छ। स्टूडियो र परिवार कोठा बरतन, घरेलू उपकरण, चिया र कफी आपूर्ति संग पनि एउटा सानो भान्सा संग सुसज्जित। खैर, होटल को यो सुविधा कहिलेकाहीं Maravel उल्लेख छ ठीक किनभने होटल Apartments4* छ। तर, आफ्नो प्रतिक्रियाहरू मा, तिनीहरूले एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ रेस्टुरेन्ट मा खाना रूपमा भान्सा बर्तन प्रयोग थियो कहिल्यै गरेको धेरै पर्यटक लेख्नुहोस्।
भान्सा बाहेक, सबै कोठा प्रसाधन र तौलिया संग तखता मा फैलाउन छन् अर्को जो शवर, शौचालय र डुब्नु संग निजी बाथरूम, सुसज्जित छन्। हेयर ड्रायर, तपाईं स्वागत मा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक बालकनी / प्लास्टिक फर्नीचर संग छत छ। कोठा टेलिफोन, उपग्रह टीवी, वातानुकूलन (अतिरिक्त शुल्क), टेलिफोन, सुरक्षित (अतिरिक्त शुल्क), रेडियो, फ्रिज र यति मा। डी संग सुसज्जित भएको परिवार कोठा सोफे संग जीवित कोठा र एक ठूलो बेड एक बेडरूम छ। दुई पटक एक हप्ता - कोठा अतिथि नास्ता आउन गर्दा तौलिया हरेक दिन र ओछ्यान तन्ना परिवर्तन, हरेक बिहान साफ छन्। आवश्यक छ भने, तपाईं लाँड्री र इस्त्री सेवाहरू (अतिरिक्त शुल्क) प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बाटो गरेर, कोठा कि बगैचा बढ्न फूल संग सजी छन्। Trifle, को पाठ्यक्रम, तर धेरै सुखद। पर्यटन को मूल्यहरु लागि जाँदा, तिनीहरूले उच्च, कम से कम एक आदर्श अनुपात "मूल्य-गुणवत्ता" प्रतिनिधित्व छन्। उदाहरणका लागि, दुई को लागि एक हप्ता लामो यात्रा 1,200 यूरो (उडान, भिसा, स्थानान्तरण, बीमा, आवास र भोजन को प्रकार को लागि "सबै समावेशी") बाट खर्च हुनेछ।
पूर्वाधार र सेवा
पहिले नै उल्लेख रूपमा, होटल इलाका "Marevel" Maravel भूमि भनिन्छ। सबै भवनहरु र पूल सबै यात्री गर्न सकारात्मक भावना धेरै दिने, धेरै जो लगातार ब्लूम ट्रपिकल रूखहरू र shrubs, एक सुन्दर बगैचा कमै मात्र छन्।
होटल गरेको रेस्टुरेन्ट विशेष प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। द्वीप मा सबै भन्दा राम्रो शेफ अतिथि दुवै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्याञ्जनहरू लागि खाना पकाउन गर्न प्रयास।
एक केन्द्रीय भवन टिभी सेट क्लब टिभी कार्यक्रम र चलचित्र को प्रशंसक लागि। त्यहाँ एक बास्केटबल अदालत पनि टेनिस कोर्ट (प्रकाश र उपकरण एक शुल्क लागि), बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस र यति मा छ। डी
पर्यटकहरु द्वीप कार वा बाइक भाडामा सक्नुहुन्छ अन्वेषण प्रतिबद्ध गर्न। होटल मा भाडा एजेन्सी हैंडलिंग। को "होटल Merevel" निःशुल्क मा पार्किंग।
वयस्क र बच्चाहरु को लागि मनोरञ्जन
साना अतिथि लागि त्यहाँ एक मिनी-क्लब छ, खेल को कोठा, छोराछोरीको wading पूल, एक sandpit, swings र स्लाइडहरू संग एक ठूलो खेल मैदान। वयस्क को मनोरंजन को लागि रोचक विषय दल सङ्गठित छन्। उदाहरणका लागि, त्यसैले कराओके, बारबेक्यू संग कक्षाहरू मास्टर परम्परागत ग्रीक नृत्य को प्रदर्शन गर्ने जो इच्छा सबै दिन जहाँ एक ग्रीक साँझ, एक धनी मनोरञ्जन कार्यक्रम, र। डी यो सबै कि पर्यटकहरूले Maravel होटल4* मा उहाँलाई राखेको रिसेप्शन को आनन्द आउन हो। तिनीहरूलाई समीक्षा हालै यस होटल को पर्खालहरु मा बस उत्साहित बिताए। सबै पछि, vacationers अक्सर धेरै दया र कर्मचारी को मित्रता, साथै आफ्नो फुर्सदको समय smartly सुसज्जित कोठा भन्दा रोचक खर्च गर्न मौका भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण लागि।
यो होटल 10:00 देखि 23:00 गर्न "सबै-समावेशी" मा संचालित छ। पर्यटकहरु, नास्ता, भोजन, खाने, को "बुफे" अनुसार दिउँसो खाजा लागि। पाहुनाहरूको 'निपटान मा नाश्ता, स्यान्डविच, मिठाई, पेय, फल को एक महान चयन डायनर-पट्टी, र यति मा। डी सबै पर्यटकहरु यस होटल मा vacationing, एक आवाज सारा महाराज को कौशल4* (Rethymno) प्रशंसा होटल Maravel होटल। समीक्षा यस्तो तला calamari, झिंगा सस वा परम्परागत ग्रीक बारबेक्यू तरकारी संग र यति मा जस्तै मेनु को विस्तृत वर्णन, साथै विभिन्न राष्ट्रिय व्यञ्जन अतिथि अनुभव सापेक्षिक palatability, समावेश। डी
धेरै रूस, केही विदेशी देशहरुमा छुट्टी मा जा, को संचालक को चासो, त्यहाँ रूसी होटल मा पर्यटकहरु बीच धेरै छ। दुर्भाग्यवश, हाम्रो पर्यटकहरु आफ्नो compatriots संग विदेश भेट्न रुचि छैन। पश्चिमी युरोप :. अंग्रेजी को प्रतिनिधिहरु, फ्रान्सेली जर्मन र रूसी, आदि यहाँ पाउन सकिन्छ, तर धेरै शायद - किनभने यस होटल मा अतिथि को थोक Maravel होटल4* को टिकट खरिद गर्ने पर्यटकहरु, हामी, आनन्दित हुनुपर्छ।
यो होटल मा निजी समुद्र तट छैन, तथापि, 70 मिटर, एक5मिनेट टाढा पैदल अर्थात्, राम्रो-सुसज्जित छ बलौटे सार्वजनिक समुद्र तट छ। यसलाई वर्षा, परिवर्तन कोठा, पानी गतिविधिहरु, समुद्र तट छाते र sunbeds को एक ठूलो चयन (चार्ज) छ। तर, धेरै पर्यटक पराल मैट किन्न र समुद्र तट मा सही बढन रूखहरू छाया मा राखिएको गर्न रुचाउँदैनन्। तर बेसिन मा यी समुद्र तट विशेषताहरु उपलब्ध निःशुल्क अवकाश छन्। पर्यटकहरूले नजिकैको सुपरमार्केट विशेष मा किन्न सल्लाह छन् त्यसैले समुद्र तट सुविधाजनक, तर पानी प्राकृतिक पत्थर देखि समुद्र गर्न प्रवेश, खुट्टा चोट लाग्नु सक्नुहुन्छ कोरल चप्पल पौडी लागि।
Maravel होटल4मा आवासगृह गर्दा * होटल, पर्यटक नजिकैको आकर्षणहरू गर्न पैदल यात्रा र बाइक यात्राको आनन्द उठाउन सक्छौं। तपाईं पनि एक भाडामा कार मा यो गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, अधिक सुविधाजनक भ्रमण डेस्क जसको कर्मचारी आफ्नो क्षेत्रमा व्यवसायीक हो, सम्पर्क गर्न, र तपाईं को लागि सबै भन्दा उपयुक्त मार्ग चयन गर्नुहोस्। तर, पाठ्यक्रम, सबै भन्दा रोचक भ्रमण - यो निरीक्षण रेथिनन को आकर्षण र भ्रमण Balos बे, जहाँ यो ईजियन, Ionian र लीबिया सागर मिलती। पनि रोचक तपाईं स्थानीय गाउँलेले जीवन थाह प्राप्त र एक परम्परागत Cretan साँझ भाग गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ Axos, को गाउँमा एउटा पदयात्रा छ।
Maravel होटल4* (क्रेते)। समीक्षा
अरू जहाँ तपाईं एक विशेष होटल बारेमा unbiased जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ पर्यटकहरु को आत्मपुरक आकलन छैन? हो, हो, यो साँच्चै मामला छ। पर्यटक साइटहरु कुनै पनि होटल प्रचार मा, सबै कुरा सधैं मात्र सकारात्मक पक्ष मा, यहाँ तपाईं कहिल्यै होटल गरेको कमीकमजोरी बारे जानकारी पाउनुहुनेछ वर्णन गरिएको छ। तर पर्यटकहरु को टिप्पणी, आत्मपुरक, तर तिनीहरूले सत्यको अन्न पाउन सक्नुहुन्छ। तैपनि, बारे Maravel होटल4* कडा नकारात्मक समीक्षा फेला पार्न छ। हो, हो, यो साँच्चै मामला छ। आफ्नो आकलन मा लगभग सबै पर्यटकहरु होटल Maravel होटल4* Rethymno मा पूर्वाधार, एक सुन्दर पार्क, स्वादिष्ट भोजन र उत्कृष्ट सेवा विकास touted। सानातिना टिप्पणीहरू, समीक्षा मुख्य रूप हो जो समुद्र मा धेरै सुविधाजनक प्रवेश गर्न समुद्र तट, सम्बन्धित। तर, यो समस्या तट को धेरै फैलिएको त्यहाँ ठूलो पत्थर slabs हुन्, यो होटल, तर सारा द्वीप बस छैन, तर तिनीहरूले पारित भने आफ्नो खुट्टा अन्तर्गत तपाईं चिल्लो बलौटे तल महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
फोटो यस लेखमा र scrutiny पढेपछि तपाईं शायद यो होटल को राम्रो विचार छन्। केही कमीकमजोरी भए तापनि यसलाई आफ्नो वर्गमा अनुरूप छ र एक आराम रहन को लागि एक आदर्श स्थान हुन सक्छ। हामी तपाईंलाई क्रेते को सुन्दर टापुमा एक सुखद ब्रेक इच्छा र उज्ज्वल भावना हजारौं अनुभव।
मोन्टेनेग्रो: बच्चाहरु संग परिवार को लागि होटल। मोन्टेनेग्रो - बच्चाहरु संग आराम गर्न कहाँ
Makadi स्पा5* (मिश्र / Makadi) - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
होटल Iberostar Chich खान (Iberostar ChichKhan)4* Hammamet विवरण र समीक्षा
होटल कोरल बीच Rotana Resort Tiran 4: मिश्र मा लक्जरी छुट्टी
"प्रिमियम निलो Lagoon" होटल। Hurghada। विवरण र समीक्षा
कारहरुको लागि ट्रान्समिटर: विवरण र उपकरणहरू को वर्गीकरण
दबाइ "stugeron" निर्देश पुस्तिका।
अड्डा लागि घर जाडो फँसाना चाहे। स्पिनर्स बनाउने
मालिकहरूको समीक्षा, "निसान Tiida" पालकी 2010
जहाँ एक पत्नी र एक राम्रो पति खोज्न?
एक लोकप्रिय प्रश्न: Natasha कति वर्ष रानी?
4 एक्सेलसियर बुल्गारिया, स्वर्ण बालुवा र एक्सेलसियर 4, बुल्गेरिया, सनी बीच। विवरण, समीक्षा।
गतिविधि खाली: यसको मुख्य पक्षहरू
घरमा पैराफिन-ओजोकेराइट अनुप्रयोगहरू: प्रक्रिया, संकेत र प्रभावकारिताको विवरण
अमेरिकी इंडियन्स। मूल मान्छे को इतिहास
हाम: प्रति 100 ग्रामको क्यालोरी सामग्री